Maxaa lagu arkaa magaalada Trieste ee Talyaaniga | Wararka Safarka
Trieste waa magaalo gaar ah, kaas oo ku yaal qaybta woqooyi ee Talyaaniga, kuna wajahda Badda Adriatic oo xuduud la leh Slovenia. Waa caasimada gobolka Fruili-Venezia Giulia. Magaaladaani waa dheriga dhaqammada kala geddisan, tan iyo markii ay ku taal Talyaaniga, tallaabo ka fog Slovenia waxayna ka mid ahayd Boqortooyadii Austro-Hungaria. In kasta oo aysan weli awood u lahayn inay ka sarreyso caan ka ahaanshaha magaalooyinka kale ee Talyaaniga, haddana waa goob mudan in la arko.
Tani magaalada waxaa booqday shaqsiyaad badan sida James Joyce ama Ernest Hemingway. Waa magaalo qurux badan, oo umuuqata mid dhiirigalinaysa oo ku raaxeysaneysa jawi wanaagsan, marka laga reebo marka bora caanka ah ay dhacdo, dabeyl xoog leh oo soo muuqata dhowr jeer sanadkiiba. Waxaan waxbadan ka ogaan doonnaa magaaladan gaarka ah ee Trieste.
1 Qasriga Miramare
2 Fagaaraha Cutubka
4 Tiyaatarka Roman
5 Makhaayadaha qadiimiga ah ee Trieste
6 Matxafyada Trieste
Qasrigan quruxda badan waxaa la dhisay qarnigii XNUMX-aad wuxuuna ku yaalaa meel aad u qurux badan, oo fiirinaya Badda Adriatic. Qasrigan waxaa loo dhisay Archduke Maximilian oo reer Hasburg ah iyo xaaskiisa Charlotte oo reer Belgium ah. Sida muuqata waxaa jira sheeko sheegeysa in qof kasta oo waqti dheer ku bixiya darbiyadeeda uu ugu dambeyn u dhiman doono sida Archduke. Sikastaba xaalku ha ahaadee, kiiskan waxaan ku sameyn laheyn booqasho gaaban, in kasta oo aanan seegi karin meeshan quruxda badan. Midabka cad ee dhagaxu wuxuu ka soo horjeedaa cagaarka beeraha ku hareeraysan iyo buluugga badda, maxaa yeelay wuxuu ku jiraa dhul ku habboon. Si aad uga dhex aragto gudaha waa inaad bixisaa gelitaanka, laakiin ka sarreeya dhammaan jardiinooyinka iyo aragtidooda ayaa mudan.
Horeba bartamaha Trieste waxaan aadi karnaa Piazza della Unità, meesha ugu bartamaha badan. Fagaarahan ballaadhan ee quruxda badan waxaan ku arki karnaa daaraha waaweyn sida Qasriga Wadajirka ah, Qasriga Dowladda, Qasriga Pitteri, Guriga Stratti iyo Modello Palace iyo kuwo kale. Dhammaan dhismayaashaani waxay square-kan siinayaan qaab xarrago leh oo gaar ah. Palazzo Stratti waxaan ka heli karnaa mid ka mid ah makhaayadaha ugu caansan magaaladan, halkaas oo ay sidoo kale ku yaalliin dhowr xiise. Wadooyinka dhow qaarkood waxaan sidoo kale ka heli doonnaa xafiiska dalxiiska oo aan ka heli karno macluumaad dheeri ah oo ku saabsan meelaha xiisaha leh ee Trieste. Waxaa jira fagaarayaal kale oo sidoo kale lagu booqan karo magaalada sida Plaza de la Borsa ama Plaza Goldini, in kastoo aysan muhiim u ahayn tan.
Caadi ahaan markaan booqano magaalo waxaan dooneynaa inaan aragno qeybteeda taariikheed, meelaha ugu saxsan. Hagaag, Trieste meeshan waa San Giusto. Qeybtaan waxaan ku arki karnaa cathedral-ka magaalada, laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, oo leh daaqad ubax cad oo caan ku ah wajiga hore. Kaniisadda agteeda waxaa ku yaal Castillo de San Giusto, oo ku taal meel ku habboon aragtideeda. Maanta waxaa loo istcimaalay goob carwo lagu soo bandhigo oo leh hub iyo madxaf.
Talyaaniga oo dhan waxaad ka heli kartaa meelo ay ka tirsanaan jirtay Boqortooyadii Roomaanka, oo jirtay dhowr qarniyo isla markaana ballaadhin ballaadhan lahayd. Daaran Trieste ma ogaan doono tiyaatarkaan Roomaanka qarnigii XNUMXaad ee AD. C. ilaa qarnigii XNUMXaad, qodis ka dhacday deegaanka awgeed. Tani waxay ku sii haysay xaalad wanaagsan. Maanta hadhaagaas si cad ayaa loogu arki karaa badhtamaha wadada, inkasta oo ay ku go'doonsan yihiin daryeeladooda.
Makhaayadaha qadiimiga ah ee Trieste
Trieste waa magaalo u istaagtay inay noqoto meel siyaasiyiin iyo dad magac ku leh dhaqanka. Taasi waa sababta ay u ahaayeen makhaayado badan oo taariikhi ah Waxay sidoo kale ka heleen qaabka kuwa ka socda Vienna, oo bixiya noocyo kala duwan oo bun iyo macmacaan ah. Maanta kafateeriyadan duugga ah weli xiiso ayey u qabaan kuwa magaalada yimaada maaddaama in badan oo ka mid ahi taariikh yihiin. Qaar ka mid ah kuwa ay tahay inaan booqano waa Café San Marcos, Café Torinese ama Café Tomaseo.
Magaaladaan waxaa ku yaal dhowr madxaf oo xiiso leh. Matxafka Madaniga ah ee Taariikhda iyo Farshaxanka iyo Ortho Lapidary waxay na siineysaa qaybo ka mid ah qadiimiga deegaanka oo nooga sheekeeya taariikhda magaalada. Intaas waxaa sii dheer, waxaan arki karnaa uruurinta kale ee dhaqamada sida Mayanka ama Masaarida. Sida magaalooyin kale oo badan waxaa ku yaal matxaf Taariikh Dabiici ah, halkaas oo aan sidoo kale ka heli doonno Maktabadda Madaniga iyo Matxafka Joyce. Dhinaca kale, waxaan leenahay Matxafka Farshaxanka Oriental ee loogu talagalay dhaqanka Shiinaha iyo Jabbaan ama Matxafka Revoltella oo ah xarun farshaxan casri ah.
Tani waa a booqasho lama huraan u ah qiimaheeda taariikhiga ah. Risiera di San Sabba wuxuu ahaa xeradii kaliya ee lagu uruuriyey Naasiyiinta talyaaniga gudaheeda halkaasna waxaan ku arki karnaa wax badan oo halkaas ka dhacay, alaab shaqsiyadeed oo dhibanayaal ah waxaanan wax ka baran karnaa taariikhda xeradan. Meeshii lagu aasi lahaa meydadka meydadka, waxaa laga taagay taalo lagu sharfayo, si loogu xusuusto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Trieste